Stocker Chair - Dhizaini magazini
Chair The Stocker ndeye kusanganiswa pakati pechitsiko uye chair. Iyo yakajeka stackable matanda zvigaro yakakodzera kune yakasarudzika uye semiofficial zvivakwa. Chimiro chayo chinoratidzira pasi pekunaka kwematanda emuno. Iyo inokatyamadza yakatemwa dhizaini nekuvaka inoita kuti iite pamwe nehupamhi hwesango hwemamirimita makumi maviri nemazana mapfumbamwe huni yakasimba huni yekugadzira yakasimba asi chinyorwa chisina kujeka chinorema 2300 Gramm chete. Iko kuvakwa komputa kweStocker kunobvumira kuchengetedza nzvimbo. Yakabatanidzwa pane imwe neimwe, inogona kuchengetedzwa nyore nyore uye nekuda kwekugadzirwa kwayo kwemaumbirwo, Mhezi inogona kusundirwa zvachose pasi petafura.
Zita rechirongwa : Stocker, Vagadziri zita : Matthias Scherzinger, Izita remutengi : FREUDWERK.
Chair Matthias Scherzinger Stocker